သတ္တုလက်ကိုင်နှင့်အတူအခြေခံနှင်း Pusher ဂေါ်ပြား - တရုတ် Richina
နှင်း Tools များ
ရောင်းရန်အကောင်းဆုံးနှင်းရေမှုတ်များ Tools များ
stainless ဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးခြင်း Tools များ
သတ္တုလက်ကိုင်နှင့်အတူအခြေခံနှင်း Pusher ရေမှုတ်များ
Basic Info Model No.: H480 Head Material: Plastic Specification: Medium Application: Garden Shovel, Snow Shovel, Farming Shovel Handle Material: Steel Shape: Square Shovel Function: Multifunctional Folded: Unfolded Attachment: Attachment Customized: Customized Color: Other Overall Length: 1300mm Head Size: 480*340mm Additional Info Packaging: 12pcs/ctn Productivity: 300000pcs per month Brand: RHE Transport...
FOB စျေး: အမေရိကန် $ 0.5 - 9.999 / Piece
ငွေပေးချေမှုရမည့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ: L ကို A / C, D ကို / A, D ကို / P ကို, T / T
မော်ဒယ်အဘယ်သူမျှမ .: H480
လျှောက်လွှာ: ဥယျာဉ်ရေမှုတ်များ, နှင်းရေမှုတ်များ, စိုက်ပျိုးရေးရေမှုတ်များ
: ပစ္စည်းကိုကိုင်တွယ် သံမဏိ
ပုံသဏ္ဍာန်: Square ကိုဂေါ်ပြား
ယေဘုယျအား Length: 1300mm
ဦးခေါင်းအရွယ်အစား: * 340mm 480
ထုပ်ပိုး: 12pcs / ctn
productivity: တစ်လလျှင် 300000pcs
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး: သမုဒ်ဒရာ, Air လေကြောင်းလိုင်း
ထောက်ပံ့ရေးနိုင်ခြင်း: တစ်လလျှင် 100000pcs
HS Code ကို: 87168000
ဆိပ်ကမ်း: Ningbo, ရှန်ဟိုင်း
နှင်း Pusher ရေမှုတ်များ
အလင်းကိုအလေးချိန်နဲ့အကြမ်းခံ Poly ဆီးနှင်း pusher နှင့် နှင်းရေမှုတ်များ
မိုဃ်းပွင့် pusher is1300mm ၏ခြုံငုံအရှည်
နှင်းဂေါ်ပြားခေါင်းကိုအရွယ်အစား 480 * 340mm, ပလပ်စတစ်ပစ္စည်း
အချင်း is32mm ကိုင်တွယ်နှင့်လက်ကိုင်လူမီနီယံလက်ကိုင်များအတွက် avialable ဖြစ်ပါသည်, ဖိုက်ဘာမှန်မကိုင်တွယ်, သစ်သားလက်ကိုင်, သံမဏိလက်ကိုင်
အကြီးစား, အဆင်ပြေ D-ပုံသဏ္ဍာန်ချုပ်ကိုင်ထား
ဝက်အူများကချိတ်ဆက် Blade နှင့်ကိုင်တွယ်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပျသမားအမြားစုက 10 နှစ်ကျော်အလုပ်အတွေ့အကြုံနှင့်အတူဖြစ်ကြသည်။
2 ။ အပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်း
3 ။ Professinal quanlity ထိန်းချုပ်မှု
စက်ရုံ professinal စမ်းသပ်ခြင်းဓာတ်ခွဲခန်းနှင့်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု peope ရှိသည်, သေချာထုတ်ကုန်ဖောက်သည်ရဲ့လိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်းစေနိုင်သည်
ကျနော်တို့ထုတ်ကုန်အသစ်တွေဒီဇိုင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးဆဲအတွက်ဆက်ကပ်အပ်နှံ professinal R & D အသင်းရှိသည်, ငါတို့သည်သင်တို့၏လိုအပ်ချက်မှ accoring သင့်ရဲ့ proudcts စိတ်ကြိုက်သို့မဟုတ်သင်သည်သင်၏ထုတ်ကုန်စျေးကွက်အတွက်အခြားသူများ differetiate စေရန်သင့်ထူးခြားတဲ့အထူးပြုလုပ်ထားသောထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်းကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
ကျနော်တို့ DHL, UPS နဲ့တူအချို့ကြီးတွေ forwarding နှင့်အတူရေရှည်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရှိသည်, ဒါကြောင့်ငါတို့သည်သင်တို့ရေကြောင်းကုန်ကျစရိတ်ကိုကယ်တင်ကူညီပေးဖို့ပိုကောင်းတဲ့ဖြေရှင်းချက်ကိုရှာဖွေနှင့်အချိန်တင်ပို့အပေါ်နိုင်ပါတယ်
ကျွန်ုပ်တို့၏အရောင်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှုလူအပေါင်းတို့သည်အလွန်ကောင်းစွာထုတ်ကုန်ကိုသိပြီးနောက်, သူတို့ကအလွန်လျင်မြန်သငျသညျတုံ့ပြန်ချက်ကိုပေးနိုင်ပါသည်လည်း, professinal ဝန်ဆောင်မှုအားဖြင့်သင်တို့ကိုပေး, ငါတို့တင်းကျပ်သောအမိန့်ကို p ရှိ
စံပြလက်စွဲစာအုပ်နှင်း Pusher ထုတ်လုပ်သူ & ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းရှာဖွေနေပါသလား ငါတို့သည်သင်တို့ဖန်တီးမှုအတွက်အကူအညီရရန်အကြီးအစျေးနှုန်းများမှာကျယ်ပြန့်ရွေးချယ်ရေးရှိသည်။ လူအားလုံးတို့သည် Poly နှင်း Pusher အရည်အသွေးကိုအာမခံဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့နှင်း Pusher ကို eBay ၏တရုတ်မူလအစစက်ရုံဖြစ်ကြသည်။ သင်သည်မည်သည့်မေးခွန်းရှိပါကကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်အခမဲ့ခံစားရပါ။
ယခင်: စော Blade ကိုနှင့်အတူလူမီနီယမ် Long ကလက်ကိုင်သစ်ပင် Pruner
ABS နှင်း ဂေါ်ပြား
နှင်းရေမှုတ်များ Blade ကို
နှင်းဂေါ်ပြား Long ကလက်ကိုင်
နှင်းရေမှုတ်များ Tools များ
အဆိုပါနှင်းရေမှုတ်များရန် Tools များ
နှင်းရှင်းလင်းရေးများအတွက် Poly ထက်တောင်ဦးရေမှုတ်များ
လူမီနီယမ် Blade ကိုနှင့်အတူအားကစား Utility ကိုကားနှင်းရေမှုတ်များ
Wood ကအတူ Poly ကောက်ပဲသီးနှံနဲ့ Snow ထက်တောင်ကိုငျတှယျ
Hollow Decorati နှင့်အတူပလတ်စတစ်နှင်း Pusher ရေမှုတ်များ ...
351 Youyi Bei လမ်း, Shijiazhuang တရုတ်, 050051 ။